Inguqulo 0.2.9 – Bug fixes
July 21, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
The last izinsuku ezimbalwa zazisetshenziselwa silungise ezinye izimbungulu kubika abasebenzisi bethu. Credits Full kunikezwe encwadini log ushintsho. Sithanda ukubonga wonke umuntu ukubika izimbungulu kithi ngoba kusisiza ngcono lokhu software for everyone.
Sijabulela shoka you futhi uzama ukushiya no amatshe unturned ukuze akusize, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi, futhi uma asizange waphendula ngesikhathi esithile – nje uxhumane nathi futhi!
Thina babuye babuzwa mayelana neminikelo (kabili kuleli sonto). Ngakho kuqala – okwamanje thina cha amukela phi neminikelo imali (nakuba siqonda izinhloso zakho) kodwa senza ukwamukela ezinye izinhlobo ezimbalwa ngeminikelo. Donate us isikhathi ngokuthumela imibiko bug (futhi ngisho kangcono, patches 😉 ) , basakaze ulwazi ngalokhu plugin ngokubhala okuthile blogs akho noma izinkundla ozithandayo, uvotele le plugin in the wordpress plugin lwemibhalo ukuze abantu abangaphezu ukuyisebenzisa futhi ekugcineni – ungakwazi njalo ukusisiza ngokubheka futhi wahumushela le site wakho umama izilimi.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: bugfix, Iminikelo, minor, ukukhululwa, plugin wordpress